Oduu Oromiyaa - Oromia Shall be Free - Page 3
Dhiirti haqaa akkatti dirree baaftee dhugaa jiru lafa keessi.Karaa Oromoon irra deemuun barbaachisu ummatatti garsiifti.Dargaan gola keessatti dahattee odoo waan dubbatame sirrtitti dhaggeeyfattee hin hubatin, …
Manni maree paartilee mormituu (caucus) hundeeffame.
Oduu Ubuntu Amajji 28 bara 2014 Paartileen siyaasaa mormituu 10 ta’an adeemsa fooramii marii biyyaalessaa irratti komii bu’uuraa qabna jedhan. “Marii biyyoolessaa sirna dimokiraasii dhugaa …
“Oromiyaan Guantanamo taatee jirti”
OMN: Imala Galatoomaa Jawaar Mahommad, Fürth, Jerman ( waxabajjii 04 , 2022)
Mootummaan Tigraay mootummaa Federaalaa wajjiin dhoksaan marii taasisaa akka jiru gabaafame.
Akka Sudan Post gabaasetti mootummaa Federaalaa fi Adda Bilisummaa Ummata Tigraay kan Tigraay bulchu jidduutti xalayaa nagaa wal jijjiiruun dhoksaan taasifamee jira. Qondaala olaanaa mootummaa …
Mariin kun marii biyyaalessaa fi haala Itoophiyaan amma irratti argamtu irratti kan xiyyeeffate jedhame. Mariin hooggansi paartilee siyaasaa Itoophiyaa 5 fi bakka bu’aan Ameerikaa irratti …
Wiixata darbe aanga’onni naannoo Amaaraa ibsa kennaniin duula olaantummaa seeraa kabachiisuu gaggeefamaa jiruun namootni 4500 ol ta’an hidhamuu beeksisaniiru. Duulli kun torban darbe keessa kan …
GALATOOMAA! North America, We are coming !June/ July 2022
Page 3 of 249«12345	»	102030...Last »